Dacwad ku oogidda askeriga Soomaali-Mareykan ah “oo dib loo dhigay” - BBC News Somali
Dacwad ku oogidda askeriga Soomaali-Mareykan ah “oo dib loo dhigay”
Lahaanshaha sawirka MINNEAPOLIS POLICE DEPARTMENT
Image caption Sida uu sheegay qareenkiisa, Maxamed Nuur xabadii uu riday ayey ku dhimatay Ms Damond
Justine Damond, oo 40 sano jir ahayd, waxaa dilay Maxamed Nuur bishii July ka dib markii ay booliska telefoon ka wacday si ay ugu wargeliso in haweeney ay ka qeylineyso duleedka gurigii ay ka deganayd Minneapolis.
Dacwad oogaha baaritaanka ku haya kiiska dilkii loo geystay haweeney u dhalatay Australia ayaa sheegay in shaqo dheeraad ah uu kiiska u baahan yahay, ka hor inta aan la go'aasan in dacwad lagu oogo askerigii toogtay haweeneyda.
Baaritaannada la xiriira geerideeda ayaa hadda socdo, mana jiraan dacwado lagu oogay Maxamed Nuur, illaa iyo hadda.
Dacwad oogaha ayaa horay u ballanqaaday in go'aan uu gaarayo ugu dambeyn dhammaadka sannadka.
US: Caro ka dhalatay askari Soomaali ah oo toogasho ku dilay haweenay
Laakiin Khamiistii, wuxuu sheegay in kiiska uu u baahan yahay wakhti dheeraad ah, ayna tahay in aan lagu degdegin baaritaanka iyo dib u eegidda.
"Aad bay muhiim u tahay in si sax ah loo helo, halkii si degdeg ah loo gebagebayn lahaa," ayuu warbixin ku yiri Dacwad oogaha Hennepin County, Mike Freeman.
Image caption Dacwad oogayaasha waxay sheegayaan in ay helayaan macluumaad badan oo la xiriira geerida Justine Damond.
Hadalkiisa ayaa yimi ka dib markii laba isbuuc ka hor uu soo baxay muuqaalka Mr Freeman oo sheegaya in uu waayay cadeyn ku filan oo lagu dacweeya Maxamed Nuur, balse raali gelin ayuu ka bixiyay hadalkaas.
Muuqaalka waxaa ka dhashay walaac ay muujiyeen qoyska Ms Damond oo ku nool Australia. Waxay sheegeen in ay "aad uga walwalsan yihiin" in toogashada aan si sax ah loo baarin.
Ms Damond hub maysan haysan, dharka jiifkana way xirnayd, markii uu tooganayay Mr Nuur oo ka soo degay gaariga roondada ee booliska, sida maamulka ay sheegeen. Waxay u dhimatay hal xabo oo uga dhacday caloosha.
Maxamed Nuur wuxuu go'aansaday in baarayaasha uusan kala hadlin arrinta toogashada.
Kiiska ayaa dhaliyay qeylo dhaanta Australia iyo Mareykanka taas oo sababtay in ay iscasisho madixii booliska Minneapolis.
16 Febraayo 2017
20 Luulyo 2017
1 Nofembar 2016
Maqal Maxkamadda Minneapolis oo xukuntay dhallinyaro Soomaali ah